Myanmar Human Resources Institute | Home - MHR
Myanmar Human Resources Institute
Myanmar Human Resources Co., Ltd (MHR) was incorporated asalimited company in 1998 byagroup of educationists, the first business education and management training institute in Myanmar, offering graduate and post graduate level qualification courses, public training courses, and corporate training courses.
Why MHR ?
1998 ခုနှစ်မှစပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး Management Diploma များဖြစ်သော ABE (UK), ၏ Management Diploma များမှ အဆင့်အားလုံးနှင့် stream အားလုံးကို သင်ကြားမှု သက်တမ်း (၂၁)နှစ် တိုင်သင်ကြားနေသော တစ်ခုတည်းသော သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ခြင်း။
သက်တမ်း (၂၁) နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုံရှင် (၄၂)ဦးနှင့် President Award (၂)ဦး ကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ဖြင့်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သော တစ်ခုတည်းသော သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ခြင်း။
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ အင်္ဂလန်အသိအမှတ်ပြု သင်ကြားမှု အကောင်းဆုံးဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသော သင်တန်းကျောင်း တစ်ခုဖြစ်ခြင်း။
ABE (UK) အဖွဲ့ကြီး၏မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးသော Fellow (F. A. B. E) များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသော ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဒေါ်လှမြင့်နှင့် သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ(၁၅)နှစ် အထက်ရှိ ဆရာ / ဆရာမများ၊ နိုင်ငံတကာ (UK, Malaysia, Singapore) သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရှိ Master, Ph.D ဘွဲ့ရဆရာ/ဆရာမများ ဦးဆောင်သင်ကြားပေးနေသော သင်တန်းကျောင်း တစ်ခုဖြစ်ခြင်း။
ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုရှင်များနှင့် တန်းစဉ်ဂုဏ်ထူးရှင်စီနီယာများမှ အတန်းတိုင်းတွင် Course Manager များနှင့် ဘာသာရပ်တိုင်းတွင် Study Guide များအဖြစ် အချိန်ပြည့် တာဝန်ယူအထောက်အကူပြု သင်ကြားပေးနေသော တစ်ခုတည်းသော သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ခြင်း။
စာသင်ကြားရေးအပြင် Working Experience များရရှိစေရန်အတွက် Intenship Programme များစီစဉ်ပေးခြင်း၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ International Company များတွင် Management Study Tour များသွားရောက် ခြင်းများပြုလုပ်ပေးသော သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်း။
လူမှုဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပညာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ CSR activity များအား အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်း။
သင်တန်းတစ်ခုပြီးတိုင်း 20% Discount ပေးပြီး ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သူများကို ပညာသင်ဆု (Scholarship) ချီးမြှင့် ပေးသော တစ်ခုတည်းသော သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်း။
သင်တန်းကျောင်းတစ်ခု ကောင်းမကောင်းသိရှိရန် အဓိကတိုင်းတာရေးပေတံဖြစ်သည့် ထူးချွန်ကျောင်းသား/ သူများ မွေးထုတ်နိုင်ခြင်းဟူသောအချက်ကို လက်တွေ့အောင်မြင်မှုဖြင့် သက်သေပြနိုင်သော တစ်ခုတည်းသော သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ခြင်း။
Develop people to bright future.
ABE Qualification Framework
ABE Level4Foundation Diploma
Equivalent to Master’s degree level
Olympic Tower , Room 505,
5th Floor, Coner of Mahabandoola Road & Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar, 11182.
(95.1) 252-751 , (95.9) 25000-7070
Copyright © MHR Institute . 2021 All Right Reserved. Powered by MISL